စီးရီးအေမှာ ရော်နယ်ဒိုရဲ့ ဂန္ထဝင်တွင်မှုတွေ ရပ်တန့်တော့မှာလား? - Shwe Soccer
စီးရီးအေမှာ ရော်နယ်ဒိုရဲ့ ဂန္ထဝင်တွင်မှုတွေ ရပ်တန့်တော့မှာလား?
ခရစ်တီယာနို ရော်နယ်ဒို လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ ရောက်ရာနေရာမှာ အောင်မြင်မှု့များစွာ ရှာဖွေနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဂန္နဝင် ကစားသမားဆိုတာ လွဲမှားစရာမရှိပါဘူး။ ပရီးမီးယားလိဂ်၊လာလီဂါ နဲ့ ဆီးရီးအေ အထိ အောင်မြင်မှု့ကြီးမားခဲ့တဲ့ ရော်နယ်ဒို အတွက် အသက် အရွယ် ကြီးမြင့်လာတာ က တားဆီးမှု့တစ်ခု ဖြစ်မလာသေးပဲ အောင်မြင်မှု့ပန်းတိုင်တွေ ဆက်တိုက် စိုက်ထူနေဆဲပဲပါပဲ။
အီတလီ လိဂ်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်၊လာလီဂါ တို့ထက် လွယ်ကူတယ်လို့ဆိုနိုင်ပေမယ့် ယူဗင်တပ်စ် တစ်သင်းလုံးကို ရော်နယ်ဒို ထမ်းတင်ထားတဲ့ အင်အားက လျှော့တွက်လို့မရတာကြောင့် ပေါ်တူဂီသားရဲ့ ခြေစွမ်းအပေါ်မှာ အထင်သေးလို့တော့မရနိုင်ပါဘူး။ ရော်နယ်ဒို က ဆာရီ ရဲ့အသင်းကို အခက်ခဲမျိုးစုံကြားကနေပဲ ဖလားရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပေမယ့် လာမယ့်ရာသီမှာ နည်းပြအတွေ့ကြုံနည်းပါးလွန်းတဲ့ ပီယာလို ကိုရော ထပ်ပြီးကူညီနိုင်ပါ့မလားဆိုတာက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။
ရော်နယ်ဒိူ အတွက် ဒိုင်ဘာလားတစ်ယောက်သာ အကူညီကျန်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ ပြိူင်ဘက်အသင်းတွေကအင်အားပိုမိုတောင့်တင်းလာပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက တိုက်စစ်အစွမ်းပြခဲ့တဲ့ အက်တလန်တာ အသင်းက မနှစ်ကလူစာရင်းတိုင်းရှိ‌သေးသလို အင်တာမီလန်၊အေစီမီလန်၊နာပိုလီ အသင်းတို့က ကပိုမိုအင်အားတောင့်တင်းလာတာကြောင့် ရော်နယ်ဒို အတွက် ဖလားလက်မဲ့ရာသီနဲ့စတင်ရင်ဆိုင်ရမလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။
အင်တာမီလန်အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ နည်းပြ ကွန်တီ ကို ဆက်လက် တာဝန်ပေးထားသလို ဖြည့်တင်းမှု့တွေလည်းဆက်တိုက်ပြုလုက်ထားပါတယ်။ ဟာကီမီ လို အရည်အသွေးမြင့်တောင်ပံခံစစ် ကစားသမား ကိုခေါ်ယူလိုက်တာက ကွန်တီရဲ့ မဟာဗျူဟာ ကိုထပ်မံ ထောက်ပံ့လိုက်တာဖြစ်ပြီး လော်ရန်တိုမာတီနက်ဇ် ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်လို့ အင်တာမီလန်အသင်းဟာ လာမယ့်ရာသီအတွက် အီတလီချန်ပီယံအဖြစ်ရေပန်းစားနေပါတယ်။ မိုဗခ်ျ ကို စာချုပ်သက်တမ်းထပ်တိုးနိုင်ခဲ့ပြီး တိုနာလီ လို အီတလီ ကြယ်ပွင့်ကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ အေစီမီလန် အသင်းကလည်း ဖလားစိန်ခေါ်မှု့ပြိုင်ပွဲထဲပြန်ရောက်လာနိုင်လို့ တစ်ကောင်ထဲပြေးတဲ့ လိဂ်မဟုတ်တော့တဲ့ အီတလီ မှာ ရော်နယ်ဒိုတစ်ယောက် ရုန်းကန်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာတော့….
Previous Article ဟယ်ရီကိန်းနဲ့ ဂျိမ်းစ် ကျားနဲ့ဆင် လယ်ပြင်မှာ တွေ့ကြပြီ
Next Article ဖလားရပြီး လူမဝယ်တဲ့ လီဗာပူးလ်ကို ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ဒီဘရိုင်း
စကားတောင်းစားမော်ရင်ဟိုကို သွားဆွမိလို့ အချီကြီးခံလိုက်ရတဲ့ ဆိုးလ်ရှား
စပါးနည်းပြ မော်ရင်ဟို က ဂိုးတိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သူပြောထားတာကို လှောင်ပြောင်ခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနည်းပြ ဆိုးလ်ရှား ကို ပြန်လည်တုံပြန်လိုက်ပါတယ်။မော်ရင်ဟို ဟာ ကြားရက်က ကစားခဲ့တဲ့ ယူရိုပါလိဂ်ပွဲစဉ်မှာ ပြိုင်ဘက်အသင်း ရှကန်ဒီဂျာ အသင်းရဲ့ဂိုးတိုင်တွေဟာ နိမ့်နေတာကြောင့် ဂိုးတိုင်တွေကို လဲလှယ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။ မော်ရင်ဟို အခုလိုပြောခဲ့တာကို မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းနည်းပြ ဆိုးလ်ရှား က ဘရိုက်တန် အသင်းကို (၃)ဂိုး-(၂)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရတဲ့ …
ဆွာရက်ဇ်ထွက်သွားလည်း သူရှိပါ‌သေးတယ်လို့ ဘာကာပရိသတ်တွေကို သတင်းပို့လိုက်တဲ့ အန်ဆုဖာတီ
ဘာစီလိုနာ အသင်းဟာ ဒီမနက်က ကစားခဲ့တဲ့ စပိန်လာလီဂါ ပွဲစဉ်မှာတော့ ဗီလာရီးရယ်လ် အသင်းကို (၄)ဂိုး-ဂိုးမရှိနဲ့ အနိုင်ရပြီး သူတို့ရဲ့လာလီဂါအဖွင့်ပွဲကို ဂိုးပြတ်အနိုင်နဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာ အသင်းဟာ အခုအပြောင်းအရွှေ့မှာ အဓိက ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ ဆွာရက်စ်၊ ဗီဒယ်လ်၊ အာသာနဲ့ ဆီမီဒို တို့ကို ရောင်းထုတ်ခဲ့ပြီး ယာနစ် တစ်ဦးထဲကိုသာ ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အခုရာသီမှာ ဘာစီလိုနာ အသင်းဟာ အောင်မြင်နိုင်ဖွယ်မရှိဘူးလို့ …
စီးရီးအေလက်ရှိချန်ပီယံဂျူဗင်တပ်စ်ဟာ ရိုးမားနဲ့အဝေးကွင်းပွဲစဉ်မှာ ၂ဂိုးစီသရေကျသွားခဲ့ပြီး အသင်းအတွက် ရော်နယ်ဒိုက ချေပဂိုးတွေသွင်းယူပြီး ကယ်တင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးမားအနေနဲ့ ဦးဆောင်ဂိုးတွေ အကြိမ်ကြိမ်ရရှိခဲ့ပေမယ့်လည်း ရော်နယ်ဒိုက ပြန်လည်ချေပခဲ့ပြီးတော့ ဂျူဗီအတွက် ရောမမြေမှာ အဖိုးတန်သရေတစ်မှတ်ကို ရယူပေးခဲ့ပါတယ်။ ရော်နယ်ဒိုရဲ့ ဒုတိယသွင်းဂိုးဟာ တော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်ခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့အမြင့်ခုန်နိုင်စွမ်းအားကို ထပ်မံပြသသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ်တိုက်စစ်မှူးဟာ ညာတောင်ပံကဖြတ်တင်ပေးပို့ခဲ့မှုကို ခေါင်းတိုက်သွင်းယူခဲ့ရာမှာ ပြိုင်ဘက်ကစားသမားတွေထက် ပိုမိုမြင့်မားအောင်ခုန်ခဲ့ပြီး တစ်ယောက်လျော့နေတဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကို …